Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » IBrussels Airlines iveza uphawu olutsha lwesazisi
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba zaseBelgium zokuPhula • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Utyalo mali • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
IBrussels Airlines iveza uphawu olutsha lwesazisi.
I-Brussels Airlines igcina ingqwalasela yayo kwilizwekazi laseAfrika kwaye iqinisekisa indawo yayo kwintengiso ngesazisi esitsha sophawu.
I-Brussels Airlines yakhawuleza kwaye yaqina ngo-2020 isicwangciso sayo sokuguqula i-Reboot Plus, ukuze ivule indlela yenkampani yobungqina bexesha elizayo ekwaziyo ukujongana nokhuphiswano, kunye nesakhiwo seendleko ezivakalayo kunye nempilo.
Emva kohlengahlengiso, inkampani yaqala isigaba sesibini sesicwangciso sayo sokuQalisa kwakhona: isigaba sokwakha kunye nokuphucula.
Inkampani yaseBelgian iyatshintsha ukuze ibe yinqwelomoya esempilweni, enengeniso nenika iimbono kubathengi bayo, amahlakani kunye nabasebenzi.
Namhlanje, iBrussels Airlines inikezela ngesazisi esitsha, eqinisekisa indawo yayo kwintengiso njengomphathi wekhaya waseBelgium kunye nengcali yaseAfrika Iqela leLufthansa.
Imibala ehlaziyiweyo, ilogo entsha kunye nenqwelomoya yenqwelomoya luphawu olubonakalayo lwesahluko esitsha senqwelomoya, echaza ukulungela kwayo imingeni yexesha elizayo kunye nokuphinda kugxininise ukubaluleka kophawu lwaseBelgium. Isahluko esigxininise kakhulu kumava omthengi, ukuthembeka kunye nokuzinza ngelixa ugcina ukhuphiswano lweendleko.
Ngenxa yentlekele ye-COVID-19, Iibhanoyi zeBrussels ikhawuleziswe kwaye yaqina ngo-2020 isicwangciso sayo sotshintsho Reboot Plus, ukuze kuvuleke indlela yenkampani enobungqina bexesha elizayo ekwaziyo ukujongana nokhuphiswano, ngesandi kunye nesakhiwo seendleko esisempilweni.
Usihlalo we IBhodi yezoKhenketho ye-Afrika (i-ATB), Cuthbert Ncube, uyayamkela le ntshukumo ye-Brussels Airlines, njengoko ihambelana nomsebenzi we-ATB ukukhuthaza i-Afrika njengendawo enye ngokwandisa ukhetho lokuhamba kunye nokhenketho.
Emva kohlengahlengiso, inkampani yaqala isigaba sesibini sesicwangciso sayo sokuQalisa kwakhona: isigaba sokwakha kunye nokuphucula. Iibhanoyi zeBrussels ngoku ujikela ingqalelo yayo kwikamva kunye notyalo-qhinga kuphuculwe amava abathengi, ubugcisa obutsha, digitization, iindlela ezintsha zokusebenza, kunye nophuhliso lwabasebenzi bayo.
Inkampani yaseBelgium iguqula ukuba ibe yinqwelomoya ephilileyo, enenzuzo enika iimbono kubathengi bayo, amaqabane kunye nabasebenzi; Inkampani yeenqwelomoya egxile rhoqo kwimo engqongileyo kunye nokucuthwa komzila wayo we-ikholoji. Inqwelomoya entsha yaseBrussels.
“Sifuna ukuphawula ngokucacileyo ukuqala kweNtsha Iibhanoyi zeBrussels. Kubathengi bethu, abafanelwe okona kulungileyo, kodwa nakubasebenzi bethu, abazibophelele kwinguqu esiyiqhubela phambili nabanegalelo kuyo yonke imihla. Yiyo loo nto namhlanje sibonisa uguqulelo olubonakalayo lwesiqalo sethu esitsha. Ngoluphawu lutsha, sikulungele ukubonisa abathengi bethu, abasebenzi bethu, amaqabane ethu kunye nabo bonke abanye abachaphazelekayo ukuba sityhila iphepha. Njengenye yeenqwelomoya ezine zeLufthansa Group network, sakha indlela eya kwikamva elithembisayo. Sibona olu phawu lutsha njengophawu lokuzithemba kwinkampani yethu - siphinda sigxininisa ubuni bethu njengabathwali bekhaya baseBelgium. " – Peter Gerber, CEO of Iibhanoyi zeBrussels.